Ronaldo oo ku wargeliyay Juventus inuusan dooneyn inuu markale u ciyaaro, isla markaana laga iibiyo Man City – Gool FM
Ronaldo oo ku wargeliyay Juventus inuusan dooneyn inuu markale u ciyaaro, isla markaana laga iibiyo Man City
(Madrid) 27 Agoosto 2021. Halyeeyga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa qaatay go’aankiisii ugu dambeeyay ee ku saabsan inuu ka tago Juventus xagaagan, kaddib markii uu qaaday talaabo wax ku ool ah oo muujineysa dhamaadka waayihiisa kooxda reer Talyaani.
Shabakada “Sky Sport Italia” ayaa shaacisay in 36 jirkaan uu faaruqiyay qaanadiisa qolka labiska kooxda, taasoo xaqiijineysa inuu ku sii dhawaanayo ka tagista kooxda Juventus.
Dhankiisa, saxafiga caanka ah ee Gianluca Di Marzio ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu ku wargeliyay maamulka kooxda Juventus inuusan dooneyn inuu markale u ciyaaro Bianconeri, maadaama uu dalab ka helay Manchester City.
Wararka ayaa tilmaamaya in Jorge Mendes, oo ah wakiilka Ronaldo, uu u safray Manchester si uu uga dhaadhiciyo madaxda City inay buuxiyaan codsiyada maamulka Juve, isla markaana ay heshiis la gaaraan si heshiiska loo dhammeeyo.
Juventus ayaa codsanaysa lacag u dhaxaysa 25 ilaa 30 milyan oo euro, si ay u iibiso gool dhaliyaha ugu sarreeya horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkii hore, laakiin Man City ayaa doonaysa inay laacibka ku soo qaadato lacag la’aan.
Kylian Mbappé oo aad ugu dhow inuu si rasmi ah ugu dhaqaaqo kooxda Real Madrid
Jürgen Klopp oo ka hadlay isku aadkii xalay la sameeyay ee tartanka Champions League